नेपालको भूमि फिर्ता गर भन्दै मोदीलाई करोडौ इमेल पठाउने अभियानमा सहभागी बनौ । | Smart Khabar
काठमाडौ -: भारतले नेपाली सीमा मिचेको विरोधमा सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा स्वतस्फूर्त ढंगले स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरुले एउटा गतिलो र सृजनशील अभियान सुरु गरेका छन् । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ सोझै कुरा सुन्न बाध्य हुने गरी पत्राचार गर्ने अभियान अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालको आह्वानमा नेपालस्थित भारतिय दूतावास मार्फत सोझै नेपालका लागि भारतिय राजदूतको आधिकारिक इमेल ठेगानामा पठाइएको सो इमेलपत्रमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई छिमेकी मित्र राष्ट्र हा्ेइन, सँधियार स त्रु राष्ट्रका प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।
साथै पत्रमा इण्डिया कसरी विश्व समुदायबाट अलग्गिँदै छ, कसरी विश्वभरका हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम र क्रिश्चियन लगायत सबै समुदाय उसका वि रुद्ध तयार भइरहेका छन् भन्ने पनि भारतलाई बताइएको छ । यस्ता विवरणका इमेल हज्जारौ गइसकेका छन् । अब नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने करोडौले यो अभियानमा सहभागी हुने आशा गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त इमेल पत्रमा छिमेकीको मूली कमजोर देखेर छिमेकीकी आमाको अ स्मिता लु ट्न खोज्ने हिन्दु हुन नसक्ने बरु हिन्दूको नाममा क लंक हो भनिएको छ । हिजो मध्यरातदेखि अभियानका ७७ वटै जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरु, २२ वटा विभागका विभागीय सदस्यहरु र २० वटा देशका विदेश च्याप्टर समितिकाहरु समेत गरी १३०० जनाले इमेल गरिसकेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालले जनाएको छ । पत्रमा तत्काल नेपालको मिचेको भूमि छोडेर आफ्नो पूरानै सरहदमा फर्किन चे तावनी दिँदै यदि इण्डियाले त्यसो नगरे गोर्खा रेजिमेन्टका सबै सेना इण्डियाकै वि रुद्धमा उभिने र सोे को कारण इण्डिया भन्ने देश संसारबाट र ग्लोबको नक्साबाटै हराएर जाने छ भन्ने चे तावनी पनि दिइएको छ ।
उक्त पत्र जस्ताको तस्तै – मोदी जी, हामी तिमीलाई अध्यात्मिक मान्छे नै ठानेर झुक्किएका रहेछौँ । तिमी त छिमेकीको घरमूली कमजोर देखेर छिमेकीकी आ मा बला त्का र गर्ने दा न व रहेछौ । तिमीले नेपाल मात्र होइन सीमाना जोडिएका सबै छिमेकीका आमावि रुद्ध दु र्व्यव हार र हा तपा त गरेका छौ । तिमी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आ तंक वा दीको नेता हौ । अध्यात्म र दर्शनको बुर्का लगाएर आफ्नो दा नवी य च रित्र लु काउँदैछौ । छिमेकीको मा तृब ला त्का र गर्नेवाला मित्रराष्ट्र हुँदैन, सँधियार सत्रु राष्ट्र हुन्छ । तिमी हिन्दुको नाममा क लंक हौ ।
तिमीले विश्वमा धेरै हिन्दूत्व र अध्यात्मिक राजनीतिको भाषण गर्दै हिँड्यौ । तर, तिमीले बुझ्नुपर्छ कि विश्वमा अध्यात्मिक राजनीतिको नेतृत्व तिमीले होइन हामीले गर्छौँ । किनकि, छिमेकीकी आमालाई संकटका बेला ब ला त्का र गर्नेवाला अध्यात्मिक र हिन्दु हुन सक्तैन । र, अध्यात्म र दर्शनको विश्व नेतृत्व गर्न भौगोलिक रुपमा देश ठूलो भइरहनु पर्दैन । तिमी कौ रव हौ, हामी पाण्ड व हौँ । त्यसैले हामी तिमीलई थोरै ह ति या रले पनि जित्ने छौँ ।
अन्यायका विरुद्ध निह त्था भए पनि आ क्रम णमा उत्रिन गीता, रामायण, महाभारतले नै हामीलाई सिकाएका छन् । तर, त्यसपूर्व एक पटक क्षमा दिएर हेर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले हामी नेपालीमा क्षमाको संस्कार छ । तिमी सुध्रन्छौ भने हामी तिम्रो मुर्खतालाई पुनः एक पटक क्षमा दिन्छौँ । नत्र चाँडै नै अब यो संसारका सबै विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो टेबलमाथि इण्डियाविहीन ग्लोब राखेर इण्डिया भन्ने देश यतैकतै थियो भनेर खोजिरहेका हुनेछन् ।
पहिला त हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्टका नेपालीहरुले तिम्रो ह ति या र तिमीलाई नै बुझाएर तिमीमाथि खु कु री दा ग्ने छन् । र, बेलायती सेनाबाट मात्र होइन पछिल्लो समयमा अमेरिका लगायत अन्य देशमा सैनिकमा रहेका सारा नेपालीहरु तिमीलाई धु लीसा त गर्न आ क्र म णमा उत्रिने छन् । हिजो तिमीलाई स्वतन्त्र गराउन अंग्रेजसँग खु कुरी मात्र लिएर तो पका वि रुद्ध भिडेका नेपालीहरुसँग आज त आधुनिक ह ति यार पनि छन् । भौतिक रुपमा इण्डियालाई ख त्तम गरिसकेपछि तिमीविरुद्धको घृ णा प्रदर्शन गर्दै करोडौं नेपालीहरुले एकै पटक थु केरै ग्लोबबाट इण्डियाको नक्सा मेटाइदिने छन्
के तिमी सुध्रन तयार छौ ? अथवा, कौरवजस्तो य द्धको लागि आत्मविनास निम्त्याउन चाहन्छौ ? निर्णय लिनुपूर्व तिमी यो विचार गर कि संसारका हिन्दू नै तिम्रो विरु द्धमा छन् । संसारका इस्लामहरु तिम्रो विरु द्धमा छन् ।संसारका बुद्धमार्गीहरु तिम्रो विरु द्धमा छन् । संसारका क्रिश्चियनहरु तिम्रो विरु द्धमा छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त हिन्दूहरु नै तिम्रो विरु द्धमा छन् । त्यसैले तिम्रो कारणले वि श्वयु द्धको ख तरा छ र अर्को महाभारतमा पनि जीत सत्यको हुनेछ, जीत हाम्रो हुनेछ । बुद्धभूमि, शिवभूमि, सीताभूमि, मनुभूमि, व्यासभूमिको जीत हुनेछ । त्यसैले तिमीले आफ्नो वि नास ननिम्त्याऊ । नेपालको मिचेको भूमि छोड । टिष्टादेखि कांगडासम्मको भूमिबाट तुरुन्त आफ्नो पुरानो भूमिमा जाऊ।आशा छ तिमीले आफ्नो का ल निम्त्याउने छैनौँ ।
ओमनबाट १७९ नेपाली स्वदेश फर्किए, राजदूतले जहाजभित्रै चढेर विदाई गरेपछि भावुक बने यात्रु
म डराउदिन म-जे बोल्छु सत्य बोल्छु : नम्रता सापकोटा (भिडियो)